Dowladda Federaalka oo baaritaano dheeraad ah ku sameyneysa Walxaha qarxa ee laga soo dejiyay Dekedda Muqdisho - iftineducation.com
Dowladda Federaalka oo baaritaano dheeraad ah ku sameyneysa Walxaha qarxa ee laga soo dejiyay Dekedda Muqdisho
aadan21 / October 31, 2014
iftineducation.com – Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa bilowday baaritaano dheeraad ah oo ku saabsan Kontenar walxa qarxa iyo dareyska ciidamada lagu cabeeyay lagana soo dejiyay dekedda caalamiga ah ee magaalada Muqdisho.
Wasiirka Amniga qaranka Khaliif Axmed Ereg ayaa ka hadlay arrimaha ku saabsan Kontenarkaasi, wuxuuna hoosta ka xariiqay inay qaadayaan howlgallo ballaaran oo lagu ogaanayo cida soo dejisay, halka laga keenay iyo abaabulka howshaasi oo uu sheegay in lagu doonayay in dalka ammaankiisa lagu khalkhal geliyo.
Isagoo ka hadlayay howlgalada lagu soo qabtay Kontenarka walxaha qarxa ay ku jireen, waxa uu sheegay Wasiirka amniga inay abaal marino kala duwan ku muteysanayaan taliska ciidamada Booliska Dekedda iyo saraakiil ka tirsan hay’adda nabad sugidda.
Waxa uu sheegay in ciidamada kala duwan ee Dowladda Federaalka ay bilaabayaan howlgallo kale oo uu sheegay in lagu soo qabanayo madaxda shirkadaha uu u rarnaa markabka laga soo dejiyay Kontenarkaasi, wuxuuna hoosta ka xariiqay inaan looga hari doonin cid kasta oo ku lug yeelata kiiskaan.
“Sharciga ayaan hor geyneynaa wixii Dekedda ka soo dejiyay walxaha qarxa” ayuu yiri Khaliif Axmed Ereg Wasiirka amniga qaranka oo sheegay inay sameeyeen howlgallo aan la sii shaacin oo ku saabsan baaritaano lagu sameeyay dhammaanba kontenarada yaala Dekedda Muqdisho, kuwaasi oo looga shakiyay in iyana lagu soo qariyay qalab ciidan, miinooyinka casriga ah, hubka iyo saanado Milateri oo ku socday ururka Al-Shabaab.
Waxa uu sheegay Wasiir Khaliif in Al-Shabaab ay yihiin naf la caari isla markaana ay wiiqantay awoodoodii, iyagoona maanta tabar ka raadinaya inay soo dejistaan miinooyinka lagu xiro gawaarida ee qaraxyada loo adeegsado, wuxuuna wacad ku maray in kooxda Shabaab aanay taasi u socon doonin.
Ciidamo Talyaani ah oo Muqdisho u jooga howl ka duwan tan AMISOM
R/W C/Weli oo baaraya geerida Gen. Maxamed (Muxuu ka shakisan yahay?)